1,700 oo maxaabiis oo ilaa iyo hadda gudaha Kenya looga helay cudurka Covid-19 – Radio Damal
1,700 oo maxaabiis oo ilaa iyo hadda gudaha Kenya looga helay cudurka Covid-19
Agaasimaha adeegyada Caafimaadka dalka Dr. Kisivuli Azenga ayaa sheegay in tiro dhan 1,700 oo maxaabiis ah laga helay cudurka Covid-19 halka saddex kale ay u dhinteen tan iyo markii kiiskii ugu horeeyay dalka laga xaqiijiyay bishii Maarso ee sannadkan.
Hadalkan ayuu jeediyay intii lagu guda jiray kulan maanta u dhaxeeyay guddiga Joogtada ah ee caafimaadka, wasaaradda arrimaha gudaha iyo isku duwidda howlaha qaranka iyo guddiga adeegga ciidamada asluubta.
Madaxa ciidamada asluubta dalka Wycliffe Ogalo ayaa kororka cudurka ee maxaabiista u sababeeyay inay caqabad noqotay in maxaabiista dhaxdooda ay kala fogaadaan.
Waxaa uu xusaay in in masaafada 1-mitir ee ah in maxaabiista u sii jiraan ay adkaatay.
Sidoo kale waxaa uu u mahadceliyay maxaabiista iyo saraakiisha sida wanaagsan ugu hoggansameen xaaladda hadda jirta.
Xoghayaha sare ee wasaaradda arrimaha gudaha u qaabilsan dhanka maamulka Xuseen Dado ayaa dhankiisa xusay in xabsiyada dalka ay haatan ku jiraan 30,000 oo maxaabiis ah halka 55,000 oo maxaabiis ah ay ku jireen xabsiyada markii kiiskii ugu horeeyay dalka laga xaqiijiyay.
Wuxuu sheegay in dowladda ay qaadday tallaabooyin ay ku go’doomineyso laguna maareynayo maxaabiista qaba COVID-19 ee ku jira xabsiga Nairobi.
Xabsiga dhexe ee Nairobi waxaa sidoo kale loo badali doonaa xarun karantiil ah iyadoo shaqaale qaabilsan daryeelka caafimaad oo ay weheliyaan shaqaale ka socda maamulka loo xilsaaray maareynta howlaha caasimadda dalka ee NMS halkaas laga howlgelin doono.
Dhammaan maxaabiista dhowaan xabsi ku soo biirtay ayaa mari doona 14 maalmood oo karantiil ah.